Ozi sitere n'aka Marcus Garvey si n'ụlọ mkpọrọ Atlanta, February 10, 1925 - Afrikhepri Fondation
Tọsde, Mee 13, 2021
Ozi sitere n’aka Marcus Garvey si n’ụlọ mkpọrọ Atlanta, Febrụwarị 10, 1925
JEnwere m obi ụtọ ịgwa gị na ohu gị dị umeala n'obi nwere obi ụtọ ịta ahụhụ n'ihi gị na ihe kpatara anyị dịka ọ ga-ekwe omume n'ọnọdụ ndị a ebe m na-ewe oke iwe site na otu ndị na-akpa nkata aghụghọ, na-akwụsị ihe ọ bụla iji weda gị ala site n'aka m n'ọgụ maka ezi nnwere onwe na mgbapụta Africa.
Ekwenyesiri m ike na ị nyeghị otuto maka ajọ ụgha nke akwụkwọ akụkọ ọcha na nke ndị iro na nke ndị kwuru maka nrụgide m nyefere. Ndị ụgha ahụ gbara izu n'ụzọ ọ bụla iji mee ka ọ dị ka adịghị m njikere ịga ụlọ ikpe.
Onye ọka iwu m kụziiri m na ọ nweghị akwụkwọ ikike a ga-enye ụbọchị iri ma ọ bụ ụbọchị iri na anọ, dị ka a na-eme n'ụlọ ikpe; nke ahụ gaara enye m oge iji sọpụrụ njikọ ọnụ m nwere na Detroit, Cincinnati na Cleveland. Ahapụbeghị m obodo ahụ ruo awa iri mgbe ndị ụgha ahụ nụrụ na m bụ onye gbara ọsọ ndụ. Nke a bụ ozi a ga-ekesa n'akụkụ ụwa niile iji mee ka ọtụtụ nde ndị nlelị na America, Africa, Asia, West Indies na Central America daa mbà, mana ndị nzuzu ga-ama ugbu a na ha enweghị ike iduhie ha niile. ndị na-eleghara anya n'otu oge.
Achọghị m ide ihe ọ bụla n’oge a nke ga-eme ka o siere gị ike izute mmegide ndị iro n’enweghị enyemaka m. Ka anyị nwee afọ ojuju na-ekwu na akụkọ ihe mere eme nke iwe ga-abụ ọmarịcha isi na akụkọ ntolite nke Africa agbapụtara agbapụta, mgbe ndị isi ojii agaghị ata ahụhụ ọzọ n'okpuru ndị ọzọ, mana ha ga-enwe mmepeanya na obodo nke ha.
Okwu a dum bụ ihe ihere, ụwa ojii niile makwara ya. Anyị agaghị echezọ. Ourbọchị anyị nwere ike ịbụ afọ iri ise, otu narị, ma ọ bụ narị abụọ site ugbu a, mana ka anyị lelee anya, rụọ ọrụ, ma kpee ekpere, n’ihi na mmepeanya nke ikpe na-ezighị ezi ga-emebi ma weta mbibi n’isi ndị ajọ omume.
Ndị nzuzu ahụ kwenyere na ha nwere ike iweda m ala, mana ha hiere ụzọ na nke ahụ. A na-agụta minit nhụjuanya ọnụ, ma mgbe Chineke na Africa laghachiri ma nye ntaramahụhụ, a ga-amụba nkeji ahụ ọtụtụ puku maka ndị mmehie. Ndị enyi anyị Arab na Rif ga na-amụ anya oge niile, dịka ndị ọzọ nọ n'Africa na anyị onwe anyị ga-adị. Obi sie gị ike na akụnyela m mkpụrụ nke mba Negro nke enweghị ike ibibi, ọbụlagodi obere egwuregwu egwuregwu rụrụ arụ nke m bụ onye e merụrụ ahụ.
Na-ekpe ekpere maka m, m ga-abụkwa eziokwu nye ọrụ m. Achọrọ m ka unu ndị isi ojii nke ụwa mata na WEB Du Bois na ajọ ajọ asị a kpọrọ akpọ Association for the Advancement of Colored People bụ ndị iro kachasi ndị isi ojii nwere n’ụwa. ụwa. Enwere m ọtụtụ ọrụ iji nkeji ole na ole m nwere na enweghị m ike ide ogologo gbasara ya ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ, mana kpachara anya maka ndị iro abụọ a. Ekwela ka ha nweta gi site na weputa akwukwo okwu, okwu na akwukwo ndi ozo; ha bu vipers ndi soro ha na ndi ozo gbukpọchara oji ojii.
Ọrụ m ka malitere, mgbe akụkọ banyere nhụjuanya m gwụchara, mgbe ahụ, ọgbọ ndị Negro ga-enwe ntụzịaka aka na ihe ọmụma banyere mmehie nke narị afọ nke iri abụọ. Ekwenyere m na oge, amakwaara m na gị onwe gị, na anyị ga-eji ndidi chere narị afọ abụọ ma ọ bụrụ na ọ were, iji chee ndị iro anyị ihu site na ụmụ anyị.
You ga-a rejoiceụrị ọ meụ ma ọ bụrụ na ị na-arụ karịa ọrụ nzukọ Jehova karịa mgbe m nọnyeere gị. Kwado ndị na-eme ka ọ rụọ ọrụ. Nyere ha aka ka ha mee ya nke ọma, ka ọrụ ha wee gbasaa site na pole ruo n’osisi.
Anọ m na-eme mkpesa maka oge ikpeazụ maka nkwado site na Starlọ Ọrụ Black Star Line na Starzụ ahịa. A na-agba gị ume ka ị ziga ma zipu onyinye gị iji mee ka ndị isi nwee ike ịrụ ọrụ ahụ nke ọma.
Ihe niile m nyere gị. M chụrụ ụlọ m na nwunye mm hụrụ n'anya n'ihi gị. Ana m enyefe ya n'aka gị, ka ị chebe ya ma chebe ya n'oge m na-anọghị ya. Ọ bụ obere nwanyị nwere obi ike m maara. Ọ tara ahụhụ, chụọ onwe ya n’ọrụ n’ihi m; biko ahapụla ya n'oge nsogbu a mgbe ọ hụrụ naanị ya. Ahapụrụ m ya na-enweghị ego na enweghị enyemaka ihu ụwa, n'ihi na m nyere gị ihe niile, mana obi ike ya dị ukwuu, amakwaara m na ọ ga-akwado maka mụ na gị.
Mgbe ndị iro m juru afọ, na ndụ ma ọ bụ n’ọnwụ, m ga-alọghachikwute gị ka m jeere gị ozi dị ka m jeere gị na mbụ. Ndụ m ga-abụ otu; na ọnwụ m ga-abụ ụjọ nke ndị iro nke nnwere onwe negro. Ọ bụrụ na ọnwụ nwere ike, tụkwasị m obi n’ọnwụ ịbụ ezigbo Marcus Garvey nke m ga-achọ ịbụ. Ọ bụrụ na m ga-abịa n’ime ala ọma jijiji, ma ọ bụ ajọ ifufe, ma ọ bụ ihe otiti, ma ọ bụ ọrịa na-efe efe, ma ọ bụ dị ka Chineke si chọọ, mgbe ahụ hụ na agaghị m agbahapụ gị ma ọlị ma ọlị ka ndị iro gị merie gị. Agaghị m aga hel ugboro nde maka gị? Agaghị m ebibi ụwa, dịka mmụọ nke Macbeth, ruo mgbe ebighi ebi maka gị? Agaghị m etufu uwa dum na mgbe ebighi ebi n'ihi gị? Agaghị m akwa ákwá ọzọ mgbe ihe mgbakwasị ụkwụ nke Onyenwe anyị pụrụ ime ihe nile. Agaghị m anwụ n'ihi gị nde? Ya mere, gịnị kpatara iru uju? Na-ajoụrị ọiceụ, ma jide n'aka na ọ bụrụ na ọ were otu nde afọ, mmehie nke ndị iro anyị ga-eleta ọgbọ nke nde ndị na-egbochi ma na-emegbu anyị.
Cheta na ejiri m gị na chi m oreụọ iyi na ị ga-ejere gị ozi ruo na njedebe nke oge niile, ịda ada nke ihe na mbibi nke ụwa. Ndi iro chere na e meriela m. Ndi ndi German meriri France na 1870? Napoleon ọ meriri Europe n'ezie?
Ọ bụrụ otu a, mgbe ahụ atụfuru m, mana a na m agwa gị na ụwa ga-anụ maka ụkpụrụ m ọbụna puku afọ abụọ mgbe m gachara. Ekpebisiri m ike ichere afọ ojuju m na nkwụghachi nke ndị iro m. Lebe ndi-irom, na umu-ha, na umu-ha, na otù ubọchi, i gāhu nkwụghachi ka ha biri;
Ọ bụrụ na m nwụọ na Atlanta ọrụ m ga-amalite, mana m ga-adị ndụ, anụ ahụ ma ọ bụ mmụọ, iji hụ ụbọchị ebube Afrika. Mgbe m nwụrụ anwụ kechie m na akwa uhie, ojii na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, n'ihi na na ndụ ọhụrụ m ga-ebili na amara nke Chineke na ngọzi Ya iji duru nde mmadụ gaa n'ogo nke mmeri na agba ndị ị maara nke ọma. Chọọ m n'oké ifufe ma ọ bụ n'oké ifufe ahụ, chọọ m gburugburu gị, n'ihi na, site na amara nke Chineke, m ga-abịa weta m ọtụtụ nde ndị ohu ojii nwụrụ na America na West Indies na ọtụtụ nde mmadụ n'Africa iji nyere gị aka n'ọgụ maka nnwere onwe, ikpe ziri ezi na ndụ.
Mmepeanya nke oge a aghọọla onye a drunkụrụma na onye ara n'ike ya, site na nke a ọ na-achọ site na ikpe na-ezighị ezi, aghụghọ na ụgha iji kpochapụ ndị na-enweghị isi. Mana ọ bụrụ na o doro anya na ike ọchịchị na mmetụta na-emebi m obi, ihe kpatara m ga-ebilite ọzọ iji kpagbuo akọ na uche nke ndị rụrụ arụ. Nke ahụ na-enye m afọ ojuju na maka gị, ana m ekwughachi, enwere m obi ụtọ ịta ahụhụ na ọbụna ịnwụ. Ọzọkwa, a sị m, a rejoiceụrị ọ rejoiceụ n'ihi na ụbọchị ka mma na-abịa. Aga m ede akụkọ nke na-akpali nde mmadụ nke na-abịa na m ga-ekwe ka ụmụ ụmụ nke ndị iro anyị gụọ ọnụ ọgụgụ maka omume nke ndị nna ha.
Site n'enyemaka nke Chineke kachasị dị ebube, ana m ahapụrụ gị otu ntabi anya.
Marcus Garvey kọwaara ndị na-eto eto
Zụta € 12,17
Oge emelitere ikpeazụ na Mee 13, 2021 3:39
Trailers - Ihe nkiri Ikiri (Vidiyo)
Ndi mmadu ndia gha emebi ndu anyi (Audio)
Hụrụ si na mbara igwe - Akwụkwọ edemede (2006-2011)